काठमाडौं महानगरमा १८०० मत गन्दा सिर्जनाले केशव स्थापितलाई पछ्याउँदै, कसको मत कति ? - Nepalese Times
काठमाडौं महानगरमा १८०० मत गन्दा सिर्जनाले केशव स्थापितलाई पछ्याउँदै, कसको मत कति ?
Nepalese Times May 14, 2022 (1 Week ago) 922 Views
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकामा पछिल्लो मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ । अहिलेसम्म १८ सयभन्दा धेरे मत गणना गरेर सकिएको छ ।
अहिलेसम्म स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहले अग्रता लिइरहेका छन् । बालेनले ६३३ मत प्राप्त गरेका छन् । उनलाई नेकपा एमालेका उम्मेदवार केशव स्थापितले पछ्याइरहेका छन् । केशवको अहिलेसम्म ४७२ मत रहेको छ ।
यस्तै नेकपा एमालेका उम्मेदवार केशव स्थापितलाई सत्तारुढ गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसकी उम्मेदवार सिर्जना सिंहले पछ्याइरहेकी छिन् । सिर्जनाले अहिलेसम्म ३३५ मत पाएकी छिन् ।
यस्तै राप्रपाका उम्मेदवार मदनदास श्रेष्ठले १०२ र स्वतन्त्र उम्मेदवार सुमन सायमीले ६२ मत पाएका छन्। मतगणना जारी छ। कुल तीन लाख ५ सय ८४ मतदाता रहेको काठमाडौँमा एक लाख ९० हजार एक सय ७० मत खसेको थियो । ५५ जना मेयरका उम्मेदवार रहेको काठमाडौँ महानगरमा मेयरमा निर्वाचित हुनका लागि कम्तीमा पनि ६० हजार मत कटाउनुपर्छ ।
यस्तै भरतपुर महानगरपालिकामा मेयर पदको उम्मेदवार रहेकी रेनु दाहालले अग्रता बढाएकी छन् । ७ सय मत गन्दा रेनुले २७८ मत ल्याएकी हुन् । यस्तै नेकपा एमालेका विजय सुवेदीले २५८ मत ल्याएका छन् । भरतपुरमा दाहाल र सुवेदीबीच कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । उपमेयरमा काँग्रेसका चित्रसेन अधिकारीले ३१७ मत ल्याएर अग्रता बनाइरहेका छन् । राप्रापा हिमला गुरुङले १९१ मत प्राप्त गरेकी छन् ।